I-Pramiracetam powder (68497-62-1) hplc =98% | AASraw Nootropics
/ iimveliso / I-Nootropics powder / Pramiracetam powder
Akukho kalo SKU: 68497-62-1. Udidi: I-Nootropics powder
I-AASraw ikunye kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwi-Pramiracetam powder (68497-62-1), phantsi komgaqo weCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
Pramiracetam powder i-derictic dericative derivative ngenjongo yokuphuculwa kwengqondo, kunye nobungqina bokuqala bokuxhasa ukusetyenziswa kwayo ekuncedeni ukubunjwa kwememori yesikhathi eside. Nangona iinkqubo aziyazi kakuhle zonke, zinokuphucula ukuhlanganiswa kwe-acetylcholine.
Pramiracetam powder ividiyo
Ipropyracamam ephakamileyo yePowracracam
igama: Pramiracetam powder
Ifomula yeMolekyuli: C14H27N3O2
Ubunzima Ezinto: 269.38
I-Pramracetam ye powder yamanzi e-SMART
I-Coluracetam (i-MKC-231) isichengululo se-racetam esicelwa ukuba sibe sisicatshulwa sokwenza inkqubela. Iyakwazi ukulondoloza i-choline ekufakeni i-neurons xa ingenakukhubazeka, kodwa okwangoku akukho ubungqina beempembelelo ze-nootropic.
Ukusetyenziswa kwePrudracamam ePowder
Okwangoku, ububungqina obusebenzisa i-Pramiracetam powder kubantu basebenzisa i-400mg kathathu ngosuku okanye i-600mg kabini imihla ngemihla; zombini le mibhalo ye-dosing iyonke i-1,200mg ye-Pramiracetam powder imihla ngemihla.
Akuqinisekanga ukuba i-Pramiracetam ipowder kufuneka ithathwe ngokutya, kwaye akucaci ukuba i-1,200mg iyilinga elifanelekileyo okanye cha. Oku kunjalo, okwenzekayo kuyasebenza.
Ziziphi iindidi ezifunekayo endizikulindele kwiPramiracetam ePowder
I-Pramiracetam powder ilungiselela ukusebenza kobuchopho kwaye inikezela ngokuphuculwa kwengqondo, ngokukodwa malunga nokubunjwa kwememori kunye nokufunyanwa.
Ngenxa yokuba kaninzi kudala ukuvakalelwa kwengqondo ebonakalayo kunye nexabiso elithile lokuzilahla komzimba, kudla ngokuthelekiswa noRitalin. Ezinye zeenzuzo ezigqithisiweyo kakhulu zePramiracetam powder zilandelayo:
Ukukhumbuza iMemori - Ngenxa yokuba ivuselela i-hippocampus, inxalenye yengqondo ixanduva lokudala imemori emitsha, iPramiracetam powder eluhlaza iyaziwa njengamandla okukhumbula imemori. Uninzi lwabasebenzisi lubonisa ukuphucula okuphawulekayo ekubunjweni kwememori nokukhawuleza kokukhumbula, ibango eliye lakhuthazwa zifundo zezilwanyana.
Ukwandiswa kwamandla okuFunda - Abasebenzisi babika ukuba iPramiracetam powder yenza ukufunda ngokukhawuleza, kulula, kwaye kunandipha. Oku kungachazwa ubuncinci kwinqanaba lePramiracetam yokuququzelelwa kwepowder ye-neuroplasticity.
Ukulumka kwengqondo nokuCacisa - Abasebenzisi ngokuqhelekileyo babika ukuba ukuthatha i-Pramiracetam powder kubanika iimvakalelo ezinzulu zokwaziswa kwengqondo, ukugxila, ukucinga ngokukhawuleza kunye nokucinga okucacileyo.
Ubutyebi Bentlalo - Abasebenzisi abaninzi bathi ukuthatha iPramiracetam powder eluhlaza kubancedisa ukuba bathabathe inxaxheba ngokupheleleyo kwiimeko zentlalontle, inzuzo enokuthi ihambelana nokuxhaswa komsebenzi jikelele weengqondo kodwa ingaba nefuthe ngokunxulumene nemiphumo yayo yokuzilahla, enganciphisa uluntu uxhalaba.
Ukuphuculwa kobuchule obuphuculweyo - Abasebenzisi bavame ukubika iingcamango eziphuculweyo okanye eziphuculweyo, ezibandakanya umsindo ocebileyo kwaye ocebileyo kunye nokuqonda okubonakalayo ngokucacileyo kunye nombala ogqithisileyo.
Ukulungiswa Kwememori - Kwiimvavanyo ezilinyanisiweyo zonyango, i-Pramiracetam powder iboniswe ukuba yonyango olufanelekileyo lokulahlekelwa kweememori kunye nezinye iingxaki ezinengqiqo ezibangelwa kukulimala kwengqondo. Kwakhona enye yeenotropic ezahlukeneyo eziye zavavanywa eU.S. njengendlela yokulahleka kwememori ehambelana nesifo se-Alzheimer kunye nezinye iingxaki ze-neurological. Olunye uphando luye lwabonisa ukuba lunakho ukuguqula i-amnesia eyenziwe ngamachiza kumavolontiya anempilo evela kwi-18-65 yeminyaka ubudala.
I-Pramiracetam ye powder isebenza njani
Njengama-nootropics amaninzi, i-Pramiracetam powder ichaphazela ukukhululwa kwama-neurotransmitters, iikhemikhali zengqondo ezithumela isignali kwiseli enye yesinye. Kodwa i-Pramiracetam powder yenza ngendlela engathanga ngqo, ngendlela eyahluke ngayo kwizenzo eziqhelekileyo zokuzalisa i-racetam, kwaye ivuselela ingqondo ngezinye iindlela ngokunjalo.
Ngokungafani ne-piracetam, i-Noopept, kunye namanye amaninzi e-nootropics adumile, i-Pramiracetam ipowder eluhlaza ihlambulukile kunokuba i-soluble yamanzi, ithetha ukuba ifakwe kwigazi ngokusebenzisa i-fatty acids. Ifikelela kwiindawo eziphambili kunye nokukhawuleza ukuhlaziywa ngokukhawuleza, ngokuqhelekileyo ngaphakathi kwemizuzu ye-30, kwaye inexesha elide elide elide le-4-6 iiyure.
Uninzi lwamarcetam lusebenza ngokukhawuleza iindawo zokufumana i-neurotransmitter indawo kunye nokwandisa imveliso kunye nokukhululwa kwezinto ezithile ze-neurotransmitters, kodwa i-Pramiracetam powder ayibangele ngqo kwiinguqu kwiinkalo ze-neurochemical, kwaye ayibonakali ukuba inxulumene nayo nayiphi na i-neurotransmitter enkulu.
Isenzo saso esinqununu ngokukhawuleza sisenyuka esibalulekileyo kwi-hippocampus ephezulu, inxalenye yengqondo ebalulekileyo ekubunjweni kwexesha elide.
I-Choline yinto engaphambili ye-acetylcholine, i-neurotransmitter eyabandakanyeka kakhulu kwiinkqubo zengcinga eziquka ukukhawuleza ukufunda, ukukhumbula kunye nokugxininisa.
Ngenxa yokuvuselela i-choline, i-Pramiracetam ipowder eluhlaza imodareyitha yokukhululwa kwe-acetylcholine kwaye ivuselela umsebenzi owandisiweyo kwi-hippocampus. Ngenxa yokuba le nxalenye yengqondo ibalulekile kumsebenzi wememori, ukuvuselela ngokubanzi ukuba iPramiracetam powder idala ikwazi ukuphucula kokubili ukubunjwa kweememori ezintsha kunye nokugcinwa kweenkcukacha okanye iikhumbuzo zexesha elide. Ukwandiswa komsebenzi kwi-hippocampus kwandisa ukwanda kwegazi, okwenza ukuba uqaphele kwaye kuphuculwe amandla okuqonda.
I-Pramiracetam powder eluhlaza ingaba nezinye iindlela zokusebenza. Abaphengululi baye bacacisa ukuba ngaphezu kwefuthe lalo kwingqondo, i-Pramiracetam powder yenza kwiindawo zomhlaba wangaphandle kwengqondo exhomekeke kwiingqungquthela ze-adrenal. Izifundo zezilwanyana zibonisa ukuba i-Pramiracetam powder inokunyusa okanye ibuyise umlenze we-brain membrane, eququzelela isalathisi.
Ngokungafani nezinye iiklasi ze-racetam ze-nootropics, iPramiracetam ipowder eluhlaza ayibonakali ukuba ishintshe ngokunyanisekileyo ukuphaphazela okanye ukuthetha ngokomzwelo. Oku kunokuchazwa nguPramiracetam ongathinteli kwimpembelelo kwimveliso kunye nokukhululwa kwama-neurotransmitters anenempembelelo enkulu kumanqanaba omdaka kunye noxinzelelo olunjenge-serotonin, iGABA, kunye ne-dopamine.
I-Pramiracetam powder yenye yeyona nootropics enomdla kakhulu ekhoyo, enika ubungqina obukhulu kunoma yiphi i-racetam-class supplements.
Isenzo salo esiyingqayizivele siphucula umgangatho wengqondo jikelele, ukuphucula imemori, amandla okufunda, ugxininiso, kunye neengcinga zengqondo.
Isebenza kakuhle ngokwayo kwaye ingaba yongezwa ngokubaluleka kwamanye ama-nootropics, ukuphucula nokwandisa iziphumo zayo.
Ngokukhawuleza ukuba yintandokazi nabafundi, abalobi kunye nabani na abanomdla wokwandisa amandla abo engqondo, iPramiracetam powder intsha kubantu abaninzi kodwa iqala ukufumana ukufumana kakuhle ukufumana ukuba yi-nootropic evelele.
I-Pramiracetam powder yi-derivative derivative ye-piracetam, yafunyanwa yaveliswa nguParke-Davis kwi-1970s. Kuxhaswa ngokukodwa, kuqikelelwa ukuba kuphuma kwi-5-30x kunamandla ngaphezu kwepiracetam.
Ithengiswa eYurophu ngaphantsi kwegama elithi brand Neupramir, Pramistar, kunye ne-Remen kwaye imiselwe apha ukuze unyango lwe-dyslexia, i-ADHD, ingxaki yeengqondo kunye neememori ezibangelwa yisifo se-Alzheimer kunye nezinye iimeko ze-neurological.
Yayinelungelo lobunikazi e-US kwi-1979 kodwa ayivunywanga yi-USFDA nayiphi na into ethile. Nangona kunjalo, kuye kwafundwa ngokubanzi njengokwenza unyango lweengxaki zengqondo kunye nokulahleka kweememori ezinxulumene nesifo se-Alzheimer kunye nokulimala kwengqondo. Kukwajongwa kwakhona njengonyango kwiinkalo ezahlukeneyo zesistim se-nervous.
Pramiracetam Raw Powder Recipes
I-Raw Pramiracetam yePowder Marketing
Ngaba i-Pramiracetam i-powder yamanzi ifana nayo nayiphi na imiphumo yangaphandle
I-Pramiracetam powder ivame ukunyamezela kakuhle nakwii-dosage eziphezulu, kwaye imiphumo embalwa emibi iye yabhalwa.
Umphumo osisigxina ngokubhekiselele kwintsifo, enokuthintela ngokuyithatha nge-supplement ye-choline.
Iziphumo eziqhelekileyo ezichaphazelekayo, kuquka ukuxakeka kwemizimba kunye neemvakalelo zokuphazamiseka okanye ukuphazamiseka, ngokuqhelekileyo zihambelana nomyinge ophezulu kwaye, ngoko ke, unokugwema ngokunciphisa umthamo.
I-Pramiracetam powder ayilona umlutha, kwaye akukho miphumo ebalulekileyo yokusetyenziswa kwexesha elide ikhutshwe. Enyanisweni, kukho ubungqina bokuba le ncediso inokuphakamisa impilo yeengqondo kwaye ngokukhawuleza ubuyisele ukusebenza kwiibongo eziguga.
Indlela yokuthenga iPeramiracetam powder kwi-AASraw
I-Phenylpiracetam (iCarphedon) ipowder